सुचना अधिकारी ज्यू, हाललाई यो नम्बर बन्द गरिएको छ, सेवाग्राही मर्कामा परे कसो गर्ने होला ! – Samacharpati Samacharpati सुचना अधिकारी ज्यू, हाललाई यो नम्बर बन्द गरिएको छ, सेवाग्राही मर्कामा परे कसो गर्ने होला ! – Samacharpati
पाेखरा, ४ असार । केन्द्र सरकारले आवश्यक सतकर्ता अपनाउदै सरकारी कार्यलयबाट सेवा प्रवाह गर्ने निणर्य गर्यो । लामो लकडाउन पछि खुलेको सँधै एकदम धेरै भिड हुने यातायत व्यवस्था कार्यलय गण्डकी लाइसेन्स शाखामा अवस्था के छ भनेर हामी पुग्दा एउटा दृश्य देखियो जुन गैरजिम्मेवारीताको पराकाष्टा हो ।
कार्यलयको सेवा प्रबाह कसरी भईरहेको छ हरेक सुचना सुचना अधिकारी मार्फत लिनुपर्ने हुन्छ तर यो कार्यलयमा बाहिर झुण्ड्याइएको बोर्डमा राखिएको सुचना अधिकारी भरतराज काफ्लेको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा हामी नै तिन छक पर्यौ । उक्त नम्बर अहिले बन्द गरिएको छ ।